रवीको सिधाकुरा जनप्रतिनिधीहरुलाईः ‘के राजनीति गर्ने योग्यता ठेकेदारी नै हो त ?’ « News24 : Premium News Channel
रवीको सिधाकुरा जनप्रतिनिधीहरुलाईः ‘के राजनीति गर्ने योग्यता ठेकेदारी नै हो त ?’
जनप्रतिनिधीहरुका बारेमा कुरा गरौँ आज । जनताको भावना जनताको दुख, पिर मर्का समस्या प्राथमिकतालाई बुझेर त्यस उपर काम गर्न भनी जनताले भोट दिएर पठाएको मानिस नै जनप्रतिनिधी हुन्छ ।
राजनीतीक दललाई रिझाएर, चन्दा टक्राएर चुनाव उठेर जितेकाहरु जनप्रतिनिधी हुन् सक्छन् तर जनभावना र जनमर्का बुझेर त्यसको समाधानका लागि सिन्को नभाँच्नेहरु जनप्रनिनिधी हुन सक्दैनन् ।
आज तराई मधेशका समस्याहरु किन समाधान हुन सकेका छैनन भने त्यस भेगमा जन्मेर, त्यस भेगको दुख सुख बुझेर, गरिबी, अपहेलनासँग जुधेर राजनीति गरेकाहरु जनप्रतिनिधी भए पो तिनले जनताका वास्तबिक समस्या समाधान गर्न दिन रात काम गर्छन ।
प्राय जसो जनप्रतिनिधीहरु जमिन्दार, साहु महाजनहरु छन् । गरिबको प्रतिनिधीत्व गर्न गरीबै हुनु पर्छ भन्ने त छैन तर जमिन्दार र धनाढ्यहरुले गरिब जनताको मर्का बुझेनन् ।
राजनीतिक दलले पनि टिकट दिँदा खाइलाग्दो शरीर, टनाटन चन्दा र लठैत पाल्न सक्ने क्षमता हेरेर टिकट दियो । पैसा नहुनेले विचार र भिजनको आधारमा चुनाव जित्न मरेपनि सक्दैन ।
लाखाँै खर्च नगरी चुनाव जित्नेहरु औलामा गन्न सकिएलान् त्यो पनि एउटै हातको । अर्को कुरा यो मुलुकमा सबै भन्दा अस्तव्यस्त भएको क्षेत्र नै विकास निर्माण ।
बिकास निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरुले सही काम नगरेर, छिटोे काम नगरेर अथवा यो वा उ बाहानामा निर्माण सम्पन्न नगरेका साना ठुला आयोजनाको लिस्ट निकै लामो छ ।
तर गत स्थानिय चुनावमा राजनीतिक पार्टीको टिकट लिएर चुनाव समेत जित्ने ठेकेदारहरु यति छन् कि भनेर र गनेर साध्य छैन । खोज पत्रकारीता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार सुदुरपश्चिमका ९ जिल्लामा मात्र ३६ जना निमार्ण व्यवसायीहरु कोही मेयर भएका छन् कोही उपमेयर, कोही वडा अध्यक्ष, कोही वडा सदस्य ,गाँउपालिका सदस्य भएका छन् ।
कुनै पेशा र व्यवसायसँग रिस राग र आपत्ती दोष, पुर्वाग्रह छैन तर के राजनीति गर्ने योग्यता ठेकेदारी नै हो त ? साना तिना ठेक्का पट्टा बाट शुरु ग¥यो, सेटीङ मिलायो, कानुन छल्यो, ठुलो ठेकेदार बन्यो, राजनीति ग¥यो, आफ्नो घर बलियो बनायो बस् । देशका बाटाघाटा, भवन, पुल भाडमे जाए । हिजो तिनै ठेकेदारहरुले बनाएका बाटाहरु केही महिनामै बिग्रिएको हाम्रै आँखा अगाडि छ ।
तिनै ठेकेदारहरु हुन जसले आजपनि आफुले लिएका ठेक्काहरु पुरा गरेका छैन्न । तर तिनै ठेकेदारहरु आज जनप्रतिनिधी छन् । सोच्नुस बाटा पुलहरुको के हालत होला ?
मुलुकले चाँडै नयाँ सरकार पनि पाउने छ, तर क्षमता बिहिनहरु मन्त्री बने भने मुलुकको अर्को ५ बर्ष खेर जान्छ र मुलुक थप ५० बर्ष पछि पर्छ ।
क्यानडाको मन्त्रीमण्डलको सानो उदाहरण दिन उपयुतm ठान्दछु । स्वास्थ्य मन्त्री एक प्रशिद्ध डाक्टर छन्, कृषी मन्त्री पुराना किशान हुन, ४५ बर्षका व्यक्ति युवा मन्त्री छन् ।
एक सफल व्यापारी अर्थ मन्त्री छन् । एक अन्तरीक्ष यात्री यातायता मन्त्री छन् । खेलदकुद मन्त्री ओलम्पीक खेलाडि छन् । विज्ञान मन्त्री पिएचडी गरेका भुगल विद छन् ।
क्याविनेटमा ५० प्रतिशत महिला छन् र स्वयं प्रधानमन्त्री जस्टीन टुरुडो ४५ बर्षका छन् । मलाई थाहा छ यो क्यानडा होइन नेपाल हो र मलाई यो पनि थाहा छ, ठेकेदार, गुण्डा, तस्कर, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफिया, जग्गा माफियाहरु मात्र राजनीतिमा लागे र यी र यस्ताहरुको क्याबिनेट बन्यो भने यो मुलुक, ३३ कोटी देउता, गौतम बूद्ध, जिसस क्राइष्ट, मोहम्द लगायतका सबै देवताहरुले तथास्तु भने पनि बन्न सक्दैनन् ।